Izinto eziyi-10 okufanele zenziwe eVenice | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Amadolobha, General, IVenice
I-Italy igcwele amadolobha amahle agcwele umlando, ngasinye sinamatshe esikhumbuzo aso, imigwaqo yaso emincane kanye nezinto ezikhethekile ezenzekayo. Akungabazeki ukuthi izwe kuningi okumele likubone, futhi ohambweni ngalunye singanikela ngezinsuku edolobheni elilodwa, njenge IVenice, lelo dolobha liwele ngemigudu yamanzi ehlukile emhlabeni.
Namuhla sizobuyekeza i- Izinto eziyi-10 okufanele zenziwe yebo noma yebo lapho uya eVenice, uma unenhlanhla yokuvakashela leli dolobha elihle. Futhi asikhulumi nje ngokuhamba nge-gondola, nakho okuhlangenwe nakho, kepha kunokunye okuningi. Jabulela yonke le mibono bese uyibhala phansi njengoba ibalulekile uma uzokwenza ukubaleka edolobheni lemisele.
1 Hamba futhi uthathe izithombe kuRialto Bridge
2 Finyelela eSikwele saseSt
3 Vakashela iSt. Mark's Basilica
4 Faka isigodlo sakwaDoge
5 Ukubukwa kwepanoramic okuvela eCampanile
6 Ukugibela i-gondola
7 I-Carnival yaseVenice
8 Bheka i-Basilica of Santa Maria della Salute
9 Jabulela iminyuziyamu yaseVenice
10 Vakashela uMurano noBurano
Hamba futhi uthathe izithombe kuRialto Bridge
Lokhu kungenye ye izimpawu ze-venice, kanye nebhuloho elidala kunawo wonke eliwela imisele. Kuze kube yikhulu le-XNUMX leminyaka bekungukuphela kwendlela yokuwela umsele omkhulu edolobheni. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX, futhi ibilokhu imile kusukela lapho. Kungavakashelwa nganoma yisiphi isikhathi, futhi kuzohlala kugcwele abantu abathatha izithombe, ngoba ukubukwa komsele kuhle futhi kungenye yezindawo eziheha kakhulu.
Finyelela eSikwele saseSt
Le yinhliziyo yaseVenice, enkulu kakhulu isikwele esihle impela, enye yezinto ezinhle kakhulu esizibonayo kulo lonke elaseYurophu. Futhi ingenye yezindawo eziphansi kakhulu, yingakho minyaka yonke iphuma ezindabeni ngenxa yezikhukhula ehlushwa yilokho okubizwa ngokuthi 'i-acqua alta'. Kuwo kukhona ezinye zezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zedolobha, njengeBasilica yaseSan Marcos, isigodlo seDoge noma iCorrer Museum. Indawo ekahle yokuzihambela futhi ube nekhofi endaweni efana neCafé Florian, enye yezindawo ezindala kakhulu edolobheni.
Vakashela iSt. Mark's Basilica
Ukufaka iBasilica yaseSan Marcos, akuvunyelwe ukuphatha ubhaka noma ama-suspension. Avulwa ngo-9: 45 ekuseni kanti ngeSonto ngo-14: 00 ntambama. Kuhlelo I-Basilica ingafakwa mahhalaYize kufanele ukhokhe ukuze ubone iMnyuziyamu yaseSan Marcos, iByzantine Treasure noma iPala de Oro.Sizomangala ngezindlu nezwi legolide elikuyo yonke indawo, ngenxa yamatshe aqoshiwe ahlotshiswe ngehlamvu legolide. Emnyuziyamu akufanele uphuthelwe izithombe zeHorses of Saint Mark, ezaziseHippodrome yaseConstantinople.
Faka isigodlo sakwaDoge
Lesi sigodlo sasetshenziswa njengenqaba nanjengejele. Inesitayela seGothic, iByzantine neRenaissance. Ngaphakathi singabona imidwebo yabadwebi ababalulekile abanjengoTitian noma iTintoretto. Ukuvakasha kungenziwa ukubona amakamelo ahlukene, indawo yezikhali, amagceke nendawo yasejele. Imali yokungena ingama-euro angama-16, yize kungukuvakasha okungalibaleki. Sizodlula nasezintweni eziyigugu Ibhuloho Lokububula.
Ukubukwa kwepanoramic okuvela eCampanile
Lona umbhoshongo wensimbi we-Basilica of San Marcos, ongaphezu kuka- Amamitha ayi-90 ukuphakama. Phezulu inezinsimbi ezinhlanu ne-vane yesimo sezulu segolide emise okwengelosi. Ukungena kungama-euro ayisishiyagalombili, futhi sizoba nemibono emihle yokubona yonke iVenice ngisho neziqhingi eziseduze.
Ukugibela i-gondola impela kuyibhizinisi edolobheni, futhi akubizi kangako, kepha kuyinto yakudala, ngakho-ke uma ufuna ukukwenza ungaxoxisana ngentengo ngaphambi kokukhuphuka, okuzoba cishe ama-euro angu-80 cishe isigamu sehora noma ngaphezulu. Kungumqondo okhetheke kakhulu futhi wothando ukuthatha izithombe eziyiqiniso kunazo zonke eVenice.
I-Carnival ingenye yezidume kakhulu emhlabeni, futhi izimaski zabo futhi. Ngaleso sikhathi, ukuhlala edolobheni kubiza kakhulu, futhi uma ungeke uqondane nalo mkhosi, ungaya njalo ezitolo zemaski zaseVenetian. Kuzo uzothola lezi zimaski ezidumile ezenziwe ngezandla, zinhle impela.
Bheka i-Basilica of Santa Maria della Salute
Lesi ngesinye isakhiwo senkolo esibaluleke kakhulu edolobheni, ngemuva kweBasilica yaseSan Marcos. Isukela ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi yadalelwa i- gubha ukuphela kwesifo. Lapha singathola nemidwebo kaTintoretto kanye neTitian. Futhi into enhle kakhulu ukuthi ukungena kukhululekile ngokuphelele.
Jabulela iminyuziyamu yaseVenice
Okubaluleke kakhulu yi- ICorrer Museum yaseVenice, ngokudweba, ukubaza nezinto zasolwandle phakathi kwezinye izinto eziningi. Ukubona lokhu neminye iminyuziyamu, into engcono kakhulu ongayenza ukuthatha iRolling Venice Card, ngoba kuleli dolobha abakhululekile. Kubiza ama-euro ayi-10 futhi kunikezwa ukungena eMnyuziyamu waseCorrer, eNational Archaeological Museum noma kuNational Marciana Library.
Vakashela uMurano noBurano
Lezi iziqhingi zaseVenice, futhi ufika lapho ukuthatha i-vaporetto. IBurano yinhle futhi inemibalabala, kanti eMurano ungajabulela izingcweti ezakha izingcezu ngengilazi kaMurano edumile, futhi ungabona iGlass Museum. IBurano idume ngezindlu zayo ezimibalabala, iphelele ngokuthatha izithombe ezinhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » IVenice » Izinto eziyi-10 okufanele zenziwe eVenice